FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA GREYHOUND ITALIANA SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Greyhound italiana sy sary
Grover the Greyhound Italiana amin'ny 4 taona amin'ny fikarakarana doggie.
Lisitry ny alika italiana Greyhound Mix
Doggystyle avy any Italia
Greyhound Italiana kely
ih-tal-yuh n volondavenona
mixer spaniel sy poodle
Alika kely mahia sy lava volo ny Greyhound italianina. Ny lohany dia lava sy tery, saika fisaka eo an-tampony miaraka amina vava iray izay mipetaka amin'ny teboka iray. Misy fijanonana kely io. Mainty na volontany ny orona, miankina amin'ny lokon'ny palitaon'alika. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Maizina ny maso salantsalany. Mipetrapetraka manaraka ny loha ny sofina kely, ary rehefa mailo ny alika dia miankavanana miankavanana. Arohina ny hatoka lava. Lalina sy tery ny tratra. Mahitsy ny tongotra eo anoloana. Dewclaws azo esorina. Ny rambo lava sy matevina dia mahia, manify hatrany amin'ny teboka iray. Ny palitao fohy sy manjelanjelatra dia misy loko rehetra, ao anatin'izany ny volondavenona, volondavenona, mena, mena, manga, mainty, fotsy na crème. Ny alika dia mety fotsy miaraka amin'ny marika loko na loko misy marika fotsy eo amin'ny tratrany sy ny tongony. Misy kinova flecked koa nefa tsy eken'ny firenena rehetra. Brindle sy mainty ary mainty dia tsy ekena amin'ny peratra fampisehoana AKC.
Ny Greyhound italiana dia milalao, mazoto, be fitiavana, manan-tsaina ary tsara fomba. Manaiky izy amin'ny ankapobeny ary tsy mila zavatra hafa afa-tsy ny hampifaly ny tompony. Mahatsapa ny feon'ny olona iray izy ary tsy hihaino raha mahatsapa fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy, na izany aza tsy hamaly tsara ny fifehezana henjana. Ny tompony dia mila milamina, nefa manana rivotra voajanahary. Azo atokana amin'ny olon-tsy fantatra mifanerasera tsara . Ny alika olon-dehibe dia tsy marefo raha mety hiseho. Amin'ny ankapobeny dia tsy sarotra ny mampiofana raha toa ka mifanaraka amin'izy ireo ny mpikarakara azy. Ity alika ity dia mety ho saro-kenatra sy saro-kenatra raha tsy voaaro loatra, ary tsy mahazo fanatanjahan-tena ampy, anisan'izany ny fitsangatsanganana entana isan'andro . Mahomby indrindra amin'ny trano mangina izy io, na dia mifanerasera tsara amin'ny ankizy sy ny alika ary saka hafa aza izy, raha toa ka mampiseho ny fitarihana ny olombelona manodidina azy. Ao anatin'ny toe-javatra manahirana, aza manandrana manome toky ny alika amin'ny fikolokoloana na fifamohana , satria manamafy ny fihenjanana amin'ny alika izany. Ao amin'ny tontolon'ny alika, rehefa ao anaty todika tsy azo antoka ny alika, ary manandrana manome toky azy am-pitiavana ianao, dia hitan'ny alika ianao fa malemy kokoa noho ny azy. Manamafy ny tsy fandriam-pahalemana izany. Mila manome angovo matanjaka sy matanjaka kokoa azo omena alika ianao. Ny Greyhounds italianina dia tena miankina sy milamina. Mila anao ho mpitondra entana ity alika ity. Ny alika kely sy tsy azo arovana loatra dia hiambina raha matahotra izy ireo. Aza avela hivoatra ny alika kelinao Syndrome kely alika , izay inoan'ilay alika fa manjaka ao an-trano. Izany dia mety hiteraka karazana degre isan-karazany olan'ny fitondran-tena . Afaka sarotra vaky trano . Haingam-pandeha ity karazana ity, tena mihetsika ary mahay mihanika.
Hahavony: 12 - 15 santimetatra (30 - 38 cm)
Lanja: 6 - 10 pounds (3 - 5 kg)
Misy karazany roa ny lanjany: 8 kilao (4 kg) ambony indrindra, ary 4 kilao mahery.
Ny Greyhounds italianina dia mora voan'ny androbe, mihintsana ny stifle, tapaka, PRA (Progressive Retinal Atrophy). Mora mifaly ny dadama. Ny alika olon-dehibe dia henjana ihany, na izany aza, ny alikakely dia marefo kokoa mandra-pahatongan'ny valo ambin'ny folo volana eo ho eo, ary afaka mamaky tongotra mora kokoa izy ireo. Mandritra io fotoana io dia mitandrema tsara amin'izy ireo, fa aza atao toy ny zazakely akory izany na tsia mamoaka alika tsy milamina .
Ny Greyhound italiana dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany. Mahatsapa ny toetrandro mangatsiaka izy ireo. Matetika ny tompon-akanjo dia hametraka lobaka amin'izy ireo.
Ny Greyhounds italiana dia alika kely mavitrika izay mila zavatra tsara, mandeha isan'andro . Ho fanampin'izay, tian'izy ireo ny mihazakazaka malalaka sy milalao. Aza hadino ny mametraka azy ireo ho loha-laharana. Ny alika dia tsy vitan'ny hoe manana toe-tsaina mivezivezy isan'andro, fa manana mpitondra mitarika. Ny olombelona dia tokony hiditra sy hivoaka ny varavarana rehetra sy ny vavahady alohan'ny alika. Mba hahafahan'ny alika anao hanaja tanteraka ny fahefanao dia tokony ho mpitarika azy ianao fa tsy amin'ny fomba hafa.
12-15 taona eo ho eo. Nilaza ny tompon-trano iray, 'Nahazo IG aho. Ny iray nahavita hatramin'ny 12.5 taona. Tsy maintsy natsipy izy satria naratra nahatsiravina. Izy no fahatelo. Ilay iray kosa velona 19,3 taona. ”
mpiandry alemà chow chow mix
Ny Greyhound italianina dia iray amin'ireo alika mora alaina indrindra. Ny hany ilaina mba hitazomana ilay akanjo mamirapiratra vita amin'ny silky dia ny fikosehana amin'ny lamba famaohana na chamois. Mandrosoa ihany rehefa tena ilaina. Aorian'ny fandroana dia alao antoka fa maina sy mafana tsara ilay alika. Hetezo matetika ny rantsan-tongotra. Ity karazana ity dia mandena kely tsy misy volo.
Ny Italiana Greyhound dia karazany taloha. Ny fasana ejipsianina 6000 taona dia mampiseho alika mitovy amin'ny Greyhound italianina. Izy ireo koa dia aseho amin'ny zavakanto mediteraneanina haingon-trano tamin'ny 2000 taona lasa. Ny alika dia nanjary nalaza tamin'ny andriana nandritra ny vanim-potoana Renaissance. Alika kely karazana Greyhound dia hita tao amin'ny fikorianan'ny lava taloha tao an-tanànan'i Pompeii, izay tanàna romana rava sy nilevina ampahany akaikin'ny Naples maoderina ao amin'ny faritr'i Campania. Tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo, toa ny Greyhound, ity karazana ity dia nentin'ny sivilizasiona fenisianina tany Eropa, ary nanjary nalaza tamin'ny andriana eropeana. James I avy any Angletera, Catherine the Great of Russia, Anne of Denmark ary Queen Victoria, dia samy nanana Greyhounds Italiana avokoa. Nandritra ny taona 1700 dia nitondra ny iray tamin'ireo alika kely ireo i Frederick the Great of Prussia, ary naleviny ihany ilay alika rehefa maty tao amin'ny Sans Souci Palace izy. Ny fanirian'i Frederick dia ny handevenana azy eo akaikin'ny alikany, ka tamin'ny faha-205 taonan'ny nahafatesany, ny 17 Aogositra 1991, dia nafindran'ny fianakavian'i Frederick ny fatiny tany Sans Souci, ary napetrany teo akaikin'ny Greyhound Italiana kely. Tamin'ny taonjato faha-19 dia nisy filoham-pirenena afrikanina iray tia alika ka nanolotra omby 200 ho takalon'ny Greyhound italiana tokana. Ny Greyhound italianina dia neken'ny AKC tamin'ny 1886.
Kamora the Greyhound Italiana toy ny alika kely amin'ny 10 herinandro eo amin'ny valan-javaboary— 'Ny anarako Greyhound Italiana dia Kamora. Telo volana izy ary matanjaka be, na izany aza, indraindray loatra loatra. Tiany ny mihazakazaka ety ivelany ary hitako fa mora azon'ny kilalao lehibe kokoa izy noho ny kilalao kely kokoa. Tiany ny milalao alika hafa , fa ampitahoran'ny alika lehibe kokoa noho izy izy, nefa mbola hiezaka ny hilalao alika lehibe kokoa, raha malemy paika aminy izy ireo. Amin'ny maha-alika kely azy dia mbola tsy maintsy mianatra ny fahalemem-panahiny miaraka amin'ny alika kely hafa izy, fa amin'ny ankapobeny dia mitazona ny sarony amin'ny fomba henjana amin'ny alika kely hafa. Amin'ny ankapobeny, tsara fitondran-tena izy, nefa sarotra indraindray ny milamina. Mirona mikotrika / mihady amin'ny karipetra, rindrina, lamba firakotra sns ao amin'ny tranoko izy trano rehefa tsy ela dia tsy tany ivelany izy. Mihevitra ihany koa izy rehefa tonga ny fotoana hidirana, ary manandrana misambotra azy aho, fa lalao izany ary mazàna ny fomba tokana ahazoako azy manatona ahy dia ny mandeha lavitra ary mody manadino azy. Amin'izay fotoana izay dia ho tonga eo amin'ny tongotroo izy ary hitsambikina eo an-tongotro toa milaza hoe: 'hey, miandry ahy.' Tena mahafatifaty. Tena be fitiavana izy ary mifampikasoka ary matetika dia manakaiky ny lohako sy ny tendako ary ny tarehiko alohan'ny hipetrahany mba hahazo aina amin'ny vatanao. Kamora dia goofy be ary mampihomehy ahy isaky ny misy ny hodiny. Milalao tsara izy, mihinana tsara, ary amin'izao dia toa mahasalama be ( mandanjalanja ) canine. Tsy andriko ny hahita sy hiaina ny toetrany rehefa olon-dehibe. Ny tsara indrindra ihany no antenaiko. '
Greyhound italiana toy ny alika kely amin'ny 4 volana
Chloe ilay Italiana Greyhound milentika amin'ny masoandro atoandro
Nathanael tombo-kase ary Greyhound italiana fotsy eo amin'ny 8 volana eo ho eo
antsasaky ny chihuahua antsasaky ny voalavo
Kitapo Greyhounds italiana - havia miankavanana: Sonny (2 taona), Timer (10 taona) ary Streaky (12 taona).
Nala ilay Greyhound italiana fotsy sy fotsy amin'ny 8 volana
Bacci ilay Greyhound italianina mainty sy fotsy dia nandro niaraka tamin'ny vintana fingotra mavo
Nathanael, tombo-kase ary Greyhound italiana fotsy amin'ny faha-6 volana— 'Eto amin'ity sary ity izy dia nipetraka teo amin'ny sezalantsika. Izy dia purebred ary tiany ny mandrovitra taratasy fidiovana. '
Hijery ohatra misimisy momba ny Greyhound italianina
Sary Greyhound Italiana 1
laboratoara mainty sy zanak'osy mifangaro boxer
ohatrinona ny alika husky
manao ahoana ny chiantaraie